यथास्थितिमा काँग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैनः रामचन्द्र पौडेल » खबरहरुको एउटै केन्द्र
यथास्थितिमा काँग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैनः रामचन्द्र पौडेल
मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १३:४२ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापतिले सबै काँग्रेसीलाई समेटेर अगाडि लैजान नसक्दा पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघ काठमाडौँले आज आयोजना गरेको ‘अबको काँग्रेस र युवा विद्यार्थीको भूमिका’ विषयको विचार गोष्ठीमा उहाँले भन्नुभयो, “१३ औँ महाधिवेशनको परिणाम अहिले भोगिरहेका छौँ । वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारले दुईतिहाईको समर्थन जुटाउनु र सत्ता पक्षबाटै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुले गम्भीर आशंका पैदा गरेको बताउनुभयो । “सत्तारुढ दल पैसाको खोल ओढेर काँग्रेस सिध्याउने खेलमा लागेका छन्, काँग्रेसलाई घेराबन्दी पार्ने खेल भइरहेको छ, काँग्रेस समयमै सचेत हुनु जरुरी छ,”–उहाँले भन्नुभयो ।
पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिविधानलाई उल्लंघन गरेर पार्टी चल्न नसक्ने बताउनुभयो । “पार्टी नै विधानअनुुसार चल्न नसक्दा भ्रातृ संस्था लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । पार्टी पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सामन्तवाद र चाकडीबाज संस्कारले काँग्रेस अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । “सभापतिले ४० सांसद मनोनीत गर्दा मजदुर, बुद्धिजीवी, वकिल कसैलाई पनि नगर्नु दुःखद् कुरा हो, यस्तो तरिकाले काँग्रेस चल्न सक्दैन,”, उहाँले भन्नुभयो । पार्टीभित्र नीति, कार्यक्रम र सांगठनिक संरचना परिवर्तन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले काँग्रेसलाई पहिलो बनाउने दृढ संकल्प बनाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले सबै जनतालाई समेटेर अगाडि बढे मात्र पार्टी सशक्त हुने बताउनुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले काँग्रेसलाई बलियो बनाउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनको मिति तय गरी जनतामाझ जानुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले नेतृत्व, सिद्धान्त, व्यवहार र आचरण सुधार गरे मात्र काँग्रेस सुध्रिने बताउनुभयो । नेविसंघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र नेता दीपक भट्टराईले वर्तमान नेतृत्वका कारण नेविसंघ कमजोर भएको छ भन्दै नेविसंघ जोगाउन सबै विद्यार्थी एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेविसंघ काठमाडौँका अध्यक्ष मनोज वैद्यले काँग्रेस र भ्रातृसंस्थालाई चलायमान बनाउन नेविसंघ काठमाडौँले समय समयमा रचनात्मक काम गर्दै जाने बताउनुभयो ।
PREVIOUS POST Previous post: ट्रम्प-किम भेटवार्ता : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर
NEXT POST Next post: तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वमा होमिएकी जनमुक्ति सेना पूर्व लडाकु निर्मला बिक ‘साधना’ दुई वर्ष देखि बाख्राको खोरमा बास,
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १३:४२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १३:४२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १३:४२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १३:४२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १३:४२